समाचार - कपडाहरूको वर्गीकरण के हो?
कपडाहरूको वर्गीकरण के हो?
तथाकथित कपडाले टेक्सटाईल फाइबरले बनेको पानाको वस्तुलाई जनाउँछ। सामान्य कपडा उनीहरूको प्रयोग र उत्पादन विधि अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। कपडाको उद्देश्य अनुसार कपडा तीनवटा कोटीमा बाँड्न सकिन्छ: कपडा कपडा, सजावटी कपडा, औद्योगिक कपडा।
कपडाको लागि कपडा।
कपडाका लागि कपडामा कपडा बनाउनका लागि प्रयोग हुने विभिन्न कपडा कपडाहरू, साथ साथै विभिन्न कपडाका सामानहरू जस्तै सिलाई धागा, लोचदार बेल्ट, कलर अस्तर, अस्तर, र बुनेको रेडिमेड कपडाहरू, पन्जा, मोजाहरू, आदि समावेश छन्।
विविध बनावट, ढाँचा र रंग मिलान को मामला मा अन्य कपडा भन्दा सजावटी कपडा प्रमुख हो, र कला र शिल्प को एक प्रकारको भन्न सकिन्छ। सजावटी कपडालाई भित्री कपडा, ओछ्यान कपडा र बाहिरी कपडामा विभाजन गर्न सकिन्छ।
औद्योगिक कपडा व्यापक प्रकारका प्रजातिमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै फ्लफी कपडा, बन्दूक कपडा, फिल्टर कपडा, स्क्रिन, सबग्रेड स्टेप, आदि।
निम्नलिखित सामान्यतया प्रयोग गरिने कपडाहरूको विस्तृत सुविधाहरू छन्:
१ कपास कपडा
कपास सबै प्रकारका सूती कपडाको सामान्य नाम हो। यो फेसन, क्याजुअल पोशाक, अंडरवियर र शर्ट बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यसको फाइदाहरू तातो, नरम र शरीरको नजिक रहन, नमी शोषण, र राम्रो हावा पारगम्यता गर्न सजिलो छ। यसको हानि सink्कलन गर्न सजिलो छ, शिक्की छ, उपस्थिति धेरै सीधा र सुन्दर छैन, लगाउन मा सधैं फलामको हुनुपर्छ।
हेम्प एक प्रकारको कपडा हो जुन हेम्प, फ्याक्स, रमी, जूट, सिसल, केरा र अन्य हेम्प प्लान्ट फाइबरले बनेको हुन्छ। यो सामान्यतया आकस्मिक र काम गर्ने कपडा बनाउन प्रयोग गरिन्छ, र वर्तमान मा, यो सामान्य गर्मीको कपडा बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। यसको फाइदाहरू उच्च शक्ति, नमी शोषण, तातो चालन, र राम्रो हावाको पारगम्यता हुन्। यसको नुकसान लगाउन धेरै सहज छैन, उपस्थिति असभ्य, कडा हो।
रेशम रेशमबाट बनेका विभिन्न रेशमी कपडाहरूको लागि सामान्य शब्द हो। कपास जस्तै, यससँग धेरै प्रकार र फरक व्यक्तित्वहरू छन्। यो विशेष गरी महिलाको लुगाको लागि विभिन्न किसिमका कपडाहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको फाइदाहरू हल्का, फिट, नरम, चिल्लो, भेन्टिलेटिंग, रंगीन, चमकमा धनी, महान र भव्य, लगाउन सहज छ। यसको अभाव झिम्काउन सजिलो छ, अवशोषित गर्न सजिलो, पर्याप्त कडा छैन, छिटो फिक्का।
ऊनी, ऊन पनि भनिन्छ, विभिन्न प्रकारको ऊन र कश्मीरी कपडा को लागी एक सामान्य शब्द हो। यो सामान्यतया औपचारिक र उच्च-अन्त कपडाहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तै पोशाक, सूट, कोट, इत्यादि। यसको लाभहरू रिinkल प्रतिरोधी र पोशाक-प्रतिरोधी, नरम हातको भावना, सुरुचिपूर्ण र स्पष्ट, लचिलो, कडा तातो छन्। यसको नुकसान मुख्यतया धुनुको कठिनाई हो, गर्मीको कपडा बनाउन उपयुक्त छैन।
छाला टेनि by्गले बनेको पशुको एक प्रकारको कपडा हो। यो फेसन र जाडो को कपडा बनाउन प्रयोग गरीन्छ। यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ: एउटा छाला हो, जुन छालालाई विगत ऊनले व्यवहार गर्दछ। दोस्रो फर हो, जुन बेल्ट ऊनको साथ छालाको उपचार गरिएको छ। यसको फाइदाहरू हल्का र तातो, रमणीय र महँगो छन्। यसको नुकसान यो हो कि यो महँगो छ, भण्डारण र नर्सि requirements आवश्यकताहरू उच्च छन्, त्यसैले यो लोकप्रियताको लागि उपयुक्त छैन।
Che. रासायनिक फाइबर
रासायनिक फाइबर रसायनिक फाइबरको संक्षिप्त नाम हो। यो एक प्रकारको कपडा हो जुन उच्च आणविक यौगिकले बनेको हो। सामान्यतया, यसलाई दुई वर्गहरूमा विभाजन गरिएको छ: कृत्रिम फाइबर र सिंथेटिक फाइबर। तिनीहरूको सामान्य फाइदाहरू उज्ज्वल रंग, नरम बनावट, ड्रपिंग, चिल्लो र आरामदायक हुन्। तिनीहरूको बेफाइदा हुन् पहिरो प्रतिरोध, तातो प्रतिरोध, नमी अवशोषण र कमजोर पारगम्यता, गर्मी हुँदा सजीलो गर्न सजिलो, र इलेक्ट्रोस्टेटिक उत्पादन गर्न सजिलो छ। यद्यपि यो विभिन्न प्रकारका कपडा बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, समग्र स्तर उच्च छैन, र यो सुरुचिपूर्ण हलमा पुग्न गाह्रो छ।
ब्लेन्डि एक प्रकारको कपडा हो जुन प्राकृतिक फाइबरलाई केमिकल फाइबरको साथ एक निश्चित अनुपातमा जोड्दछ, जुन विभिन्न प्रकारका कपडा बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका फाइदाहरू कपास, भँप, रेशम, ऊन र रासायनिक फाइबरका फाइदाहरू मात्र शोषण गरिरहेका छैनन्, तर उनीहरू आफैंको कमीकमजोरीहरूलाई यथासक्दो बेवास्ता गरिरहेका छन् र तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा छन्, त्यसैले यो लोकप्रिय छ।